गर्ने हो सुन फलाउने खेती ?
लक्ष्मी गौतम, पाँचथर २०७४ माघ २९ गते ,
एउटा यस्तो कृषि बाली जसको मूल्य किलोको दुई हजार पाँच सय पर्न सक्छ । यसलाई खोल्साका सुन भन्छन् । बालीको नाम हो अलैंची । अलैंचीको पर्यायवाची नाम बनेको छ ‘खोल्साको सुन’ । अलैंची खेती गरेर मालामाल हुनेहरु पूर्वी नेपालमा हजारौं छन् ।
त्यति महंगो छ, अनि कृषक मालामाल हुने नै भए ।
तर, अब खोल्साको सुन मात्र रहेन अलैंची, पाखाको सुन पनि बनेको छ । पूर्वी नेपालको सबै पहाडी जिल्ला, मध्य र पश्चिम नेपालका केही पहाडी जिल्लामा अलैंची खेती भइरहेको छ । आम रुपमा पाइने तथा खेती गरिएको सबैभन्दा महंगो कृषि बाली अलैंची नै हुनुपर्छ ।
अलैंची खेतीले मानिसको जीवन कति फेरेको छ भन्ने अनेक उदाहरण छन् । तीमध्ये यहाँ हामी पदमप्रसाद रिजाललाई प्रस्तुत गर्दैछौं ।
पढिएन तैपनि केही गरियो
पाँचथरका चर्चित अलैंची किसान हुन् पदम । पाँचथरको फालेलुङ गाँउ पालिका वडा नम्बर का हुन् उनी । ०२२ सालमा जन्मिएका पदमलाई जागिर खाएर केही गरौंला भन्ने थियो तर पढ्नै सकेनन् । कखरा नै ढिलो उमेरमा सिके । गरिबीले पढाई अगाडि बढाउन सकेनन् । प्रवेशिका पास गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढौंला भन्ने सपना थियो तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय होइन दस कक्षा पढेपछि जीवन विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरे ।
पहिलो संघर्ष थियो गरिबीसँग । गरिबीसँग संघर्ष गर्ने प्रचलित उपाय थियो पढेर ठूलो मानिस बन्ने । त्यो नसकेपछि अर्काे उपाय थियो पुरोहित बन्ने । आफन्त तथा साथीभाई पुरोहित बन्न संस्कृत पढ्न गए । कोही झापा गए, कोही भारतको बनारस गए । तर, पदमलाई त्यो सौभाग्य पनि जुरेन ।
उनको हातमा थियो माटो । त्यही माटोबाट बाटो बनाउन सके जीवन चल्छ नत्र गाह्रो हुन्छ भन्ने देखे । माटो अर्थात् खेती गर्नुको विकल्प थिएन । तर, जति नै मेहेनत गरेर खेती गरे पनि निर्वाह गर्नै गाह्रो ।
त्यसपछि उनले थाले अलैंची खेती । खोल्सामा, पानी भएको ठाउँमा मात्र अलैंची खेती हुन्छ भनिन्थ्यो । उनले पाखामा रोपे । पाखामा धेरै रुख थियो, रुखले छहारीको काम गर्छ, अलैंची कसो नहोला त भनेर रोपे ।
थोरै झन्झटिलो हुँदैन अलैंची रोप्ने काम । महंगो पनि उस्तै । अलैंची रोप्न विशेष सीप पनि चाहिन्छ । तर, केही न केही नगरी नहुने अवस्थामा थिए । अलैंचीमा लागे ।
भन्छन् “पहिले कालीझार उम्रेर बाँझिएको पाखो जमिनमा अलैंचीका बेर्ना रोप्दा पागल हुन लाग्यो भन्थे गाउँलेहरु ।”
अलैंची फल्छ कि फल्दैन, डुब्छु कि उक्सिन्छु भनेर निकै तनावमा परे । ०५२ सालको कुरा हो यो ।
अलैंचीको विरुवा हेर्दै सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्थे । अलैंची खेती भएन भने परिवार कसरी पाल्ने ? चिन्ताको महासागरमा डुबेका थिए ।
गज्जब भयो । अलैंची हल्हलाएर बढ्न थाल्यो । त्यसरी अलैंची सप्लाएको देखेर गाउँले पनि चकित हुन थाले । पानीले मात्र होइन पसिनाले समेत सिंचाई गरिरहेका थिए पदम । अनि, नसप्लाओस् कसरी ?
अलैंची हुर्कंदै गयो । पाखो बारीमा लगाइएको अलैंचीमा पदमको भविष्य निहित थियो । अलैंची हुर्किए पनि फल्छ कि फल्दैन ? चिन्तै चिन्ता । अरु बालीजस्तो अलैंची एकै वर्षमा फल्दैन । दोस्रो वर्षदेखि अलिअलि फल्न थाल्छ र तेस्रो वर्षबाट पूरै फल्न थाल्छ । अलैंची अरु बालीजस्तो टुप्पामा नभएर फेदमा फल्छ ।
अलैंचीको बोटको फेद कोट्याएर हेरिरहन्थे पदम ।
फल्यो ! फल्यो !! अलैंची फल्यो ! अलैंची होइन पदमको पसिना फल्न थालेको थियो । बोटको फेदमा अलैंचीको झुप्पा नभएर पदमको सुन्दर भविष्य फल्न थाल्यो । कमाल भयो ।
पदम अलैंची बेच्न थाले । अलैंचीको भाऊ सुनजस्तै उतार चढाव भइरहन्छ । सुनमा केही सय रुपैयाँको मात्र हुन्छ तर बारीमा फल्ने यो सुनको भाउमा जति उतार चढाव नेपालमा अरु कुनै वस्तुको हुँदैन । कहिले सात सय रुपैयाँ किलोमा पनि झर्छ ।
भाउ बढेको बेला अलैंची बेच्ने र घटेको बेला थन्क्याएर राख्न थाले । पदमको उद्यम देखेर गाउँले पनि चकित भए ।
‘राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि व्यवसायिक रुपमै अलैँची खेतीमा होमिएँ’ पदम भन्छन् । त्यसपछि उनले खेती विस्तार गर्दै लगे । आम्दानी बढाउँदै लगे । अहिले ४० रोपनीमा खेती गरिरहेछन् ।
सबै खर्च कटाएर अलैँचीबाट वार्षिक सजिलै तीनचार लाख रुपैयाँ वचत गरिरहेका छन् । दुईजना छोरालाई पढाइरहेका छन् । मजासँग परिवार पालेका छन् अनि राम्रैसँग सम्पत्ति जोडेका छन् ।
उनलाई अलैँची खेतीका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथरले पाइप, बिषादी, पुस्तक, स्पे्र मेसिन, नर्सरीका लागि जाली र बीउ लगायतको सहयोग दिएको छ । र, तालिम पनि दिएको छ ।
परम्परागत नगदे बालीमा सर्वाेत्तम खेती अलैंचीलाई मानिन्छ । परम्परागत तरिकाले खेति नगरेर अलिकति अक्कल लगायो, तालिम लियो र नयाँ तरिका सिक्यो भने सुनकै खेती सरह हुन्छ अलैंची खेती । खोल्सा बाहेक अन्यत्र रोप्न सकिने अलैंचीको प्रजाति र प्रविधिको पनि विकास भएको छ । अलैंची खेतीको अर्काे विशेषता के भने यसमा दिनभरी खटिरहन पर्दैन । अरु खेती जस्तै समय समयमा काम गरे पुग्छ र बाँकी समयमा अन्य केही उद्यम गर्न पनि सकिन्छ ।
सुन खेती गर्ने हो कि ? ल है विचार गरौं ! हाम्रो कथा अनलाइनबाट
प्रकाशित ५ फाल्गुण २0७४ , शनिबार | 2018-02-17 03:40:11